Asi tariro yedu kuti vanotenda muna Jesu ndivo yakakura!
Zviri ruzha chaizvo uye anoyevedza. Asi ini handigoni rubatsiro asi taura kuti tariro yedu vanotenda muna Jesu ndivo yakakura zvikuru uye nani. Duplantis akawira pasi pabonde zvakare asi tariro yedu kunoita zvose nzira mukusingaperi!
6 metres uye 17 masendimita
Armand Duplantis aikwikwidzana Sweden aputsa nyika zvinopupura padanda penzvimbo panguva manheru mumba gala muPoland.
Armand Duplantis, inonzi "mondo" ane American-Swedish danda vaulter. Ane nezvekuva chizvarwa chenyika mbiri, asi achikwikwidza nokuti Sweden.
Iye akapfuura kukwirira 6 metres uye 17 masendimita panguva yechipiri kuedza.
Zviri ruzha chaizvo uye anoyevedza.
Asi ini handigoni rubatsiro asi taura kuti tariro yedu vanotenda muna Jesu ndivo yakakura zvikuru uye nani. Duplantis akawira pasi pabonde zvakare asi tariro yedu kunoita zvose nzira mukusingaperi!
VaRoma 8: 24a. Nokuti mutariro takaponeswa.
Iye akadambura nedanda rokutanga kuedza, asi wechipiri akaita kuti! 6 metres uye 17 masendimita! Zvakananga mushure kusvetuka akamhanyira kuna vateereri uye segerjublade.
Ndoda hatifaniri segerjubla chetariro naJesu Kristu akunda kwatiri?